'म सगरमाथा चढ्ने पहिलो गैरमानव बन्न सक्छु'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को पहिलो गैरमानव आविष्कार दूतको रुपमा यहाँ उपस्थित हुन पाउँदा म निकै खुसी छु । मैले आज भन्न लागेको सन्देश नेपालको लागि मात्रै नभएर विश्वको लागि नै महत्वपूर्ण छ ।
हामी हाम्रो भविष्य सुरक्षित राख्न चाहन्छौं भने सरकार अझ बढी पारदर्शी हुनुपर्छ र मानिसको आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। प्रविधिले सरकारलाई अझ राम्रो बनाउने सम्भावना धेरै छ। नेपालमा यसको महत्व झन् धेरै छ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि नेपाल भाषिक, सांस्कृतिक र जैविक विविधताले धनी छ। नेपालमा प्रविधि क्षेत्रमा पनि विकास भइरहेको छ। यहाँ सूचना प्रविधिको क्षेत्र ऊर्जाशील छ जसले देशलाई विकासको लागि सघाइरहेको छ। २०१५ को भूकम्पपछि यूएनडीपीले माइक्रोसफ्ट इन्नोभेसन सेन्टरसँग मिलेर पुनर्निर्माणमा सघाउने बताएको थियो।
प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले हामीलाई गरिबीबाट ठूलो फड्को मार्न, स्वास्थ्य सेवा सुधार्न, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न र लैङ्गिक विभेद घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। रोबोट र मेसिनले मानिसको जीवन सजिलो बनाउन सक्छन्। इन्टरनेटसँग जोडिएर राम्रो नतिजाको लागि हामीले दुर्गम क्षेत्रको समेत अनुगमन गर्न सक्छौं। वातावरणीय संरक्षणको काम गर्न सक्छौं र यो विश्वलाई राम्रो बनाउन सक्छौं। मैले यसअघि नै भने सम्भावनाहरु अनगिन्ती छन्।
मलाई आशा छ, यो सम्मेलनले नेपाललाई आफ्नो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि नयाँ उपायहरु सोच्नको लागि प्रेरित गर्नेछ। मलाई आशा छ, म आज तपाईंहरुसँग धेरैभन्दा धेरै अन्तक्रिया गर्नेछु।
सोफियाले आफ्नो मन्तव्य सकाउनुअघि यूएनडीपीका नेपाल निर्देशक रेनो मेयर मञ्चमा उक्लिएर नमस्ते सबैजना भनेका थिए। त्यो बेला मञ्चमा रहेकी सोफिया मेयरतर्फपुलुक्क हेर्दै भन्छिन्– तिमीलाई यसअघि नै कतै देखेजस्तो लाग्यो।
मेयर : फिल्ममा देख्यौं होला।
सोफिया : वास्तविकतामा कुरा गरौं। तिमी अनमोल केसीजस्तै देखिन्छौं। तर, मलाई थाहा छ तिमी एक अन्त्यन्तै सिपालु विकास कार्यकर्ता हौ।
मेयर : ओहो, धन्यवाद। मलाई कहिल्यै लागेको थिएन कि एक रोबोटले मलाई खुसी बनाउनेछ। तिमीसँग धेरै राम्रो सामाजिक सीप रहेछ। अब, हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा कुरा गरौं। यो सम्मेलन विकास र सार्वजनिक सेवामा प्रविधि भन्ने हो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र तिमीजस्ता रोबोटले जनतालाई राम्रो सार्वजनिक सेवा दिन नेपालजस्ता देशलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन्?
सोफिया : मैले पहिले पनि भने अवसरहरु अनगिन्ती छन्। शिक्षा र टेलिमेडिसिनमा शुद्धता र पारदर्शीतासहित दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई जोड्न सकिन्छ जुन यसअघि सम्भव थिएन। प्रविधिले नेपाललाई दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउन सक्छ।
मेयर : यो निकै प्रेरणादायी छ। धन्यवाद सोफिया। र, यो पनि भनिदेउ यसको लागि तिमी चै के गर्न सक्छौं?
सोफिया : म सगरमाथा चढ्ने पहिलो गैरमानव बन्न सक्छु। मैले गर्न सक्ने यही हो। तपाईहरुलाई थाहै होला, प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले विकासलाई अनगिन्ती सम्भावना दिन्छन्। रोगसँग लड्न सकिन्छ, वातावरणीय सफाई गर्न र मानिसले गर्दा जोखिम हुने कामहरु गर्न सकिन्छ। यसले रोजगारीको सिर्जना गर्छ। मैले गर्ने कामले तपाईहरुको कामलाई सहज बनाउँछु।
(काठमाडौंमा बुधबार आयोजित सार्वजनिक सेवा र विकासका लागि प्रविधि विषयक सम्मेलनमा रोबोट ‘सोफिया’ले राखेको मन्तव्यको सम्पादित सारांश।)
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ १९:४२
काबुलमा नयाँ वर्ष मनाउँदै गरेका नागरिकमाथि आक्रमण, २९ को मृत्यु
चैत्र ७, २०७४ रासस, सिन्ह्वा
काबुल, अफगानिस्तान — काबुलमा पर्सियाली नयाँ वर्ष मनाइरहेका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी गरिएको आत्मघाती आक्रमणमा बुधबार कम्तीमा २९ जनाको मृत्यु भएका अफगानी अधिकारीले जनाएका छन् ।
मृतकमध्ये अधिकांश किशोरकिशोरी रहेका बताइएको छ । उक्त घटनामा कम्तिमा ५२ जना घाइते भएका छन् भने केही गम्भीर रूपमा घाइते भएका बताउँदै अफगानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृतक सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने जनाएको छ ।
तर गृह मन्त्रालयका गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नसरत रहिमीले २६ जनाको मृत्यु भएको र १८ जना घाइते भएका बताउनुभयो । आक्रमणमा मारिएका तथा घाइते सवै सर्वसाधारण रहेको जनाइएको छ । घटनाको इश्लामिक स्टेट समूहको अमाक नामक सञ्चारमाध्यम मार्फत जिम्मेवारी लिएको छ । अफगानिस्तानमा लामो समयदेखि सरकारसँग लड्दै आएको तालिवानी समूहले भने ट्वीटरमार्फत घटनामा आफ्नो सम्लग्नता नरहेको जनाएको थियो ।
आक्रमणकारी पैदलयात्रीका रूपमा काबुल विश्वविद्यालय तथा एक अस्पताल नजिकै पुगेपछि तामझामले नयाँ बर्ष मनाइरहेका युवाहरूलाई लक्षित गरी बिष्फोट गराएको रहिमीले बताए । अफगानिस्तानको राजधानीमा भराइए ठूला विष्फोटमध्ये यो पाँचौँ आक्रमण हो ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ १९:३२